I-Sanding Caps Factory - Abakhiqizi base China Sanding Caps, abahlinzeki
I-YaQin Sanding Cap Mandrel
Ukusebenza nge-sanding cap
Izinto: Insimbi, Injoloba
Usayizi: 5 * 11mm / 7 * 13mm / 10 * 15mm / 13 * 19mm / 16 * 25mm
Isampula lamahhala leSanding le-Manicure Pedicure # 80 # 120 # 180
★ Usayizi omkhulu: ukuhlangabezana nezidingo zakho zokugaya ezihlukile. Uhlobo nosayizi cishe kungama-intshi ayi-16 x 25 mm / 0.6 x 1.0, kulula ukufaka nokususa, futhi kulula kakhulu ukukusebenzisa. Ingakwazi ukuhlangabezana nezidingo zobuciko obuhlukile bezipikili nezikhathi eziningi ezisebenzayo.
★ Izesekeli zezipikili zobungcweti: isethi eyenzelwe ngokukhethekile ukubhoboza izinzipho ingahlangabezana nezidingo zakho. Amandla aphezulu, ukusebenza kahle okuphezulu, umphumela omuhle, impilo ende yenkonzo, okulula ukuyisebenzisa, iphephile futhi inokwethenjelwa. Ingaphezulu lesihlabathi lisetshenziselwa ukupholisha indawo engalingani yesipikili. Ihlala isikhathi eside futhi kulula ukuyisebenzisa.
★ Ibhande lokupholisha le-Nail: lilungele ukucubungula izipikili, ingilazi, ipulasitiki, insimbi, itshe, amathayili e-ceramic, izitsha zobumba, njll. Ukugaya nokupholisha okulula, ukusebenza kahle nokusebenza okuzinzile. Ngokukhethekile eyenzelwe ukupholisha nokusika izipikili, ukugcina izipikili zihle futhi zihle.
★ Izinto zokukhiqiza ezisezingeni eliphakeme: Zenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme ze-resin, eziqinile futhi ezingamelana nokugqoka. Umphumela wokugaya ophelele, ukusebenza kahle komsebenzi nokuphila kwensizakalo ende. Sebenzisa isihlabathi esihle esisezingeni eliphakeme, isihlabathi okungelula ukuwela kuso, ungasisebenzisa ngokuthanda kwakho.
★ Kulula ukuthwala: isisindo esincane, usayizi omncane, okulula ukugcina nokuphatha, kunganikeza usizo olukhulu emsebenzini we-manicure. Kukhona nemibala eminingi ongakhetha kuyo, okubomvana, okuluhlaza okwesibhakabhaka, onsundu, obomvu nokuluhlaza okotshani.
Isisindo: 250g / ibhokisi (100pcs)
Izinto: ukusekelwa kwendwangu / kwepulasitiki
Ukumboza: Umbala onsomi
Ikhephu Elihlaza Lemvelo
Esinemthombo: Green Umbala
Ikhephu elihlaza okwesibhakabhaka
Ukumboza: Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka
Ikhephu Lokupenda Eliphuzi
Ukumboza: Umbala Ophuzi
Isigqoko Sokubomvu Esibomvu
Ukumboza: Umbala Obomvu
Isigqoko Sokumnyama Okumnyama
Ukumboza: Umbala Omnyama
Ikepisi le-Pink Sanding
Ukumboza: Umbala Opinki
I-Orange Sanding Cap
Ukumboza: Umbala we-Orange
Isigqoko Sokumhlophe Esimhlophe
Ukumboza: Umbala Omhlophe
Isikhwama Sesihlabathi Esinsundu
Ukumboza: Umbala onsundu